Izitofu ezishibhile, yisiphi ongasithenga ngo-2022? Ukushisa ngemali encane
Ama-radiators asetshenziswa kancane
I-air conditioner ephathekayo enepompo yokushisa
Izitofu ziyizisetshenziswa ezisiza ukwandisa izinga lokushisa lekamelo esilibeka kulo. Kusisiza ukuba sihlale sifudumele ezikhathini ezibanda kakhulu. Kunezinhlobo eziningi zezitofu kuye ngokuthi uhlobo lophethiloli esizisebenzisayo ukwandisa izinga lokushisa.
Kulo mbhalo sizohlaziya zonke izinhlobo zezitofu ezikhona kanye nobuhle nobubi baso ngasinye. Ukwengeza, uzokwazi ukwazi amanani futhi ufinyelele wonke lawo anekhwalithi eyengeziwe kanye nenani elihle.
Izitofu ezishibhile ezingcono kakhulu zokushisisa indlu yakho ebusika
Nansi ukukhethwa kwezitofu ezingcono kakhulu zokugwema ukubanda ebusika. Nganoma yimaphi kulawa mamodeli uzophumelela njengoba ekhethwa ngabasebenzisi futhi yiwo anenani elingcono kakhulu lemali:
I-Orbegozo BP 5007 –... Bona izici 962Izibuyekezo ezingu- XNUMX Buka isivumelwano
I-Orbegozo BP 0102 - Isitofu ... Bona izici 253Izibuyekezo ezingu- XNUMX Buka isivumelwano
I-Orbegozo BB 5000 - Isitofu... Bona izici 432Izibuyekezo ezingu- XNUMX Buka isivumelwano
ISITOVU SOKHUNI OMNYAMA... Bona izici 5Izibuyekezo ezingu- XNUMX Buka isivumelwano
Isitofu sePellet 14 kW... Bona izici 3Izibuyekezo ezingu- XNUMX Buka isivumelwano
I-AVANT AV7554 - Isitofu ... Bona izici 145Izibuyekezo ezingu- XNUMX Buka isivumelwano
Okuhle kakhulu	I-Orbegozo BP 5007 –...
Ikhwalithi yamanani	I-Orbegozo BP 0102 - Isitofu ...
Intandokazi yethu	I-Orbegozo BB 5000 - Isitofu...
ISITOVU SOKHUNI OMNYAMA...
Isitofu sePellet 14 kW...
I-AVANT AV7554 - Isitofu ...
962Izibuyekezo ezingu- XNUMX
253Izibuyekezo ezingu- XNUMX
432Izibuyekezo ezingu- XNUMX
5Izibuyekezo ezingu- XNUMX
3Izibuyekezo ezingu- XNUMX
145Izibuyekezo ezingu- XNUMX
I-Las izitofu zepelethi Bezisabalele eminyakeni edlule ngenxa yokusebenza kahle kwazo kanye nokusebenza kahle. Ukusebenza kwawo kulula futhi akubizi. Isitofu sinethangi lokugcina uphethiloli, kulokhu, i-pellet. Lapho sifaka uhlelo lokusebenza, isikulufa sihambisa i-pellet egumbini lomlilo ukuphemba umlilo ngezinga uhlelo lokulawula i-elekthronikhi elibonisa ngalo.
Ama-pellets ayasha, akhiphe ukushisa kanye nentuthu ehanjiswa endaweni engemuva lapho kuxhunywe khona ushimula ongaphandle.
Uma ufuna ukuba nesitofu se-pellet, sebenzisa ukunikezwa kwethu.
Bona izitofu ze-pellet
Enye yezinzuzo ezinikezayo yikhono lokuhlela izikhathi lapho isitofu sivulwa ukuze sinikeze ukushisa ekamelweni futhi siphinde sivale. Lezi zitofu zididekile kakhulu nezitofu ze-biomass, njengoba i-pellet injalo uhlobo lwamafutha e-biomass. Yakhiwe nge-sawdust ehlanganiswe ngendlela yamasilinda amancane. Ngokuvamile, amakhilogremu amabili ama-pellets ahlinzeka ngokushisa okufanayo okukhiqizwa ilitha elilodwa likadizili.
Ziyizitofu ezishibhe kunazo zonke ezitholakalayo namuhla. Amafutha ayo yi-biomass etholakala emahlathini. Zisekelwe kuzitofu zezinkuni zendabuko yokuphila konke, kodwa zisebenza ubuchwepheshe obuphambili kakhulu. Lokhu kwenza ukusetshenziswa kwayo kukhululeke kakhudlwana futhi ukuvutha kuthuthukisiwe.
Njengoba uphethiloli wawo ungokwemvelo futhi ungokwemvelo, awayingozi kangako endaweni ezungezile. Ziphelele ukuze zisebenzise ukushisa okungokwemvelo kakhulu nokumsulwa.
I-Las Izitofu zokhuni bangabomdabu kakhulu. Lezi yizinto ezisebenzisa izinkuni njengezibaseli. Izinkuni zitholakala ezihlahleni. Ukusetshenziswa kwayo kwansuku zonke kusekhishini lezindawo zasemaphandleni, nakuba liphinde linikeze ukushisa nokwandisa izinga lokushisa lekamelo.
Ngokuvamile, zonke izitofu zezinkuni zinepayipi eliphelela kushimula okhipha amagesi akhiqizwa lapho kusha futhi lisize ukunciphisa ingozi yokuphefumula umoya ongcolile.
Ziyizitofu ezilula kakhulu ongazisebenzisa futhi zinikeza ukuphumula okwengeziwe ngenxa yemvelo eyengeziwe yasekhaya ehlinzekwa yilangabi. Kungase kuthathe amahora amane ukuthi ilangabi lishise, kodwa ingagcina ukushisa kuze kufike emahoreni angaba ngu-20. Isitofu sezinkuni esivutha cishe amahora angu-9 sinikeza ukushisa okwanele ubusuku bonke.
Unentshisekelo yokuthenga isitofu sezinkuni? Lapha uzowathola eshibhile.
Bheka izitofu zezinkuni ezivuthayo
Izinkuni ezisetshenziswayo kufanele zibe nomswakama omncane uma ufuna zihlale zivutha isikhathi eside. Lapho ukhuni loma, luvutha ngokushesha.
Kukhona nezitofu zezinkuni ezinohhavini ukusizakala ngokushisa okukhiqizwa futhi upheke okunye ukudla okufana nesinkwa, ama-pizza, izikeyi ezithile nokosa.
Idizayini ye- izitofu zegesi zivumela ukusebenza kahle okukhulu. Amafutha asetshenziswe kulesi senzakalo igesi ye-butane. Bavame ukuba nokusebenza okuhle kakhulu. Esikhathini esidlule, abantu babesaba ukuthenga nokusebenzisa igesi yemvelo noma amasilinda egesi e-butane.
Nokho, lezi zinhlobo zezitofu okwamanje ziphephe kakhulu. Ukwengeza, bayakwazi ukukhiqiza ukonga okwengeziwe ngenyanga futhi singayisebenzisa noma nini isimo esiphuthumayo.
Izitofu zegesi zigqama ngokushibhile kakhulu. Uma ufuna ukusizakala ngezintengo ezihamba phambili, ungaphuthelwa okunikezwayo kwethu.
Bheka izitofu zegesi
Ukusebenza kwayo kulula kakhulu. Inohlaka lapho kubekwa khona isilinda segesi ye-butane futhi isishisi siphethe ukugcina ukuvutha okusebenzayo. Phakathi nenqubo, igesi ye-butane ishiswa nge-oxygen emoyeni futhi inikeza ukushisa ekamelweni.
Lezi zitofu zingasuswa endaweni eyodwa ziye kwenye kalula lapho zifunwa (inqobo nje uma sicishiwe). Zilungele ukushisisa amakamelo amancane, njengoba enza ngokushesha.
Lezi zinhlobo zezitofu azaziwa kakhulu, kodwa zisebenza kahle kakhulu. Iwuhlelo oluphathekayo olungadingi noma yiluphi uhlobo lokufakwa kanye / noma ukulungiswa. Uphethiloli wayo uwuketshezi (upharafini) futhi ukuvutha kwawo kuthule cwaka.
Phakathi kwezinzuzo zayo kulula ukuwahambisa ukusuka kwelinye igumbi ukuya kwelinye kanye nesivinini sawo sokushisisa. Ngaphezu kwalokho, ukushisa okukhiqizwa yi- Izitofu zikapharafini ayigxili kakhulu njenge-heater kagesi, kunalokho isakazeka kangcono kakhulu ekamelweni. Lokhu kwenza umuzwa wokunethezeka owunikezayo ube mkhulu kakhulu.
Abasebenzisi abaningi bakhetha izitofu zikapharafini noma zikaphalafini ngenxa yevelu yazo yekhalori ephezulu kanye nokuphepha. Uma ufuna ukuthenga isitofu sikapharafini, sebenzisa lokho esikunikezayo.
Bheka izitofu zikapharafini
Uma kuqhathaniswa nokusetshenziswa kwezinye izitofu, isitofu sikapharafini sisetshenziswa kancane kakhulu.
I-Las Izitofu zikagesi Zingamadivayisi asebenzisa ugesi ukushisa ukumelana nokwandisa izinga lokushisa elizungezile. Banikeza ukushisa okuhlanzekile nokumsulwa, njengoba kungakhiqizi noma yiluphi uhlobo lokukhishwa kwekhabhoni. Enye yezingqinamba iwukuthi ukwenyuka kwesikweletu sikagesi.
Ukusetshenziswa kwezitofu zikagesi cishe kusabalele futhi zikhululekile kakhulu ukuthutha kusuka ekamelweni elilodwa kuya kwelinye futhi ngisho noma uhamba uhambo. Kodwa-ke, azikho kahle ngokonga, njengoba zinyusa kakhulu isikweletu sikagesi uma usetshenziswa njalo.
Izitofu zikagesi zihlale zithengwa kahle ukushisisa amagumbi ngesikhathi. Zishibhile futhi zinesisindo esiphansi, ngakho zilungele ukusetshenziswa ngezikhathi ezithile.
Bheka izitofu zikagesi
Alungile uma ufuna ukugxilisa ukushisa ekamelweni elilodwa noma amabili futhi ungadingi ukushisa ukuze usakaze kuwo wonke amagumbi wekhaya.
Izinguquko okufanele zicatshangelwe lapho ukhetha isitofu
Ukukhetha uhlobo olulodwa lwesitofu noma olunye, kubalulekile ukucabangela izici eziningana:
Okokuqala yikhono lesitofu ukukhiqiza ukushisa ngezindleko ezincane. Ngokuvamile, lapho isitofu sinamandla, sidinga uphethiloli owengeziwe noma sisebenzisa ugesi owengeziwe (uma isitofu sikagesi).
Ukuze sazi amandla e-calorific anele esitofu sethu, kufanele sazi indawo yonke yendlu. Amandla akalwa nge-kW. I-kW ngayinye yamandla ikwazi ukufudumeza ama-square metres ayi-8 Of surface. Ngakho-ke, uma ikhaya lakho lingamamitha-skwele angu-80, amandla angu-10 kW azokwanela.
Ukuze wazi ukuthi yisiphi isitofu esilungele isimo sakho, kubaluleke kakhulu ukwazi igumbi lapho sizosetshenziswa khona kakhulu noma lapho sizofakwa khona. Uma igumbi elikhulu lingamamitha-skwele angama-30, kufanele sisebenzise amandla angaphezulu kwalapho singamamitha-skwele angama-20. Ukwandisa ukusetshenziswa kwesitofu, kuyatuseka ukusebenzisa idatha yereferensi ku-kW okukhulunywe ngayo ngenhla.
Indawo yesitofu iyisici esinqumayo sokusebenza. Uma igumbi esizolifaka noma esizolibeka lifudumele kakhulu, kuzodingeka sisebenzise isikhathi esincane. Ngokuphambene nalokho, uma kubanda kakhulu, kufanele silungise igumbi ukuze sinciphise ukusetshenziswa kwesitofu.
Ukuze uqhubeke nokwandisa ukusebenza kahle kwesitofu, zama ukukhetha indawo engxenyeni yekamelo eline-insulation enhle kakhulu, ukuze ukushisa okuvela esitofu kungalahleki ngezindonga noma amafasitela. Kubalulekile ukushiya isikhala esingaba ngu-40 cm phakathi kodonga nesitofu nanoma iyiphi into evuthayo ukuze kugwenywe imililo engase ibe khona.
Kudingeka ngempela ukuthi igumbi lapho sibeka khona isitofu libe nesistimu yokukhipha umoya kanye nokukhipha intuthu ukuze kugwenywe ukushisa okukhulu nanoma iyiphi ingozi yomlilo.
Amawindi kanye ne-insulation
Uma indlu ine-insulation enhle namafasitela acwebezeliswe kabili, isitofu sizokwenza kangcono. Ungakhohlwa ukuhamba igebe mayelana 30-40 cm phakathi kwesitofu nanoma iyiphi into engasha.
Indlela yokukhetha isitofu
Uma zonke izinto eziguquguqukayo okufanele zicatshangelwe sezaziwa, singakhetha ukuthi yisiphi isitofu esisilungele kakhulu.
Izitofu zezinkuni yizo ezihlinzeka ngokushisa okuphezulu kokusebenza kanye nokuvutha okuhlanzekile. Angasebenzisa izinto zokubasa ezivuselelekayo njengokuthena izinkuni. Ngaphezu kwalokho, banesici sokuhlobisa ilangabi elisinika lona. Iyakwazi ukusinika lowo mkhathi wasekhaya esiwufunayo. Kunamamodeli amaningi okujwayela umhlobiso esiwuthanda kakhulu. Phakathi kwezinzuzo zayo sithola ukuthi awudingi noma yimuphi umsebenzi. Badinga kuphela uxhumano ngaphandle ukuze bakhiphe intuthu.
Ngakolunye uhlangothi, izitofu ezakhiwe ngezinto zensimbi nezinto eziphikisayo zilungiselelwa ukushisisa izikhala ezinkulu kunezinkuni.
Uma ufuna ukushisa okusheshayo kodwa okungapheli, khetha isitofu esenziwe ngezinto zensimbi. Uma ufuna ukushisa okunamandla futhi okuhlala isikhathi eside, kodwa kancane ekuqaleni, Khetha izitofu zokhuni, ze-biomass noma ze-pellet.
Ohlotsheni ngalunye lwezinkuni kukhona izinhlobo ezinikeza ukusebenza okungcono nezitofu ezisebenza kahle.
Ezitofu zezinkuni sithola izinhlobo ezihamba phambili njengoRocal, uCarbel, uHergom noBronpi.
Izitofu zePellet zinemikhiqizo eyaziwa kakhulu njenge Lacunza, Ecoforest, Bronpi and Edilkamin.
Ngokuqondene nezitofu zegesi sithola imikhiqizo enamandla njenge UDeLonghi no-Orbegozo.
Okwezitofu zikapharafini sinemikhiqizo enezinga elihle / isilinganiso samanani njenge Qlima, Webber and Kayami.
Izitofu zikagesi zinezinhlobo eziningi zemikhiqizo, njengoba zithengiswa kakhulu. Sithola brand best ezifana I-Orbegozo, i-Clatronic, i-Rowenta, i-Klarstein, i-Thermic Dinamics, i-DeLonghi ne-Taurus.
Ngalolu lwazi ungakhetha ukuthi yisiphi isitofu esilungele isimo sakho futhi wonge ngangokunokwenzeka ekushisiseni kuyilapho ujabulela zonke izinzuzo.
1 Izitofu ezishibhile ezingcono kakhulu zokushisisa indlu yakho ebusika
2 Izinhlobo zezitofu
2.1 I-air conditioner ephathekayo enepompo yokushisa
2.2 I-heater kagesi
2.3 Ama-radiators asetshenziswa kancane
2.4 Irediyetha yamafutha
2.5 Izitofu zezinkuni
2.6 Izitofu zeBioethanol
2.7 Izitofu zepellet
2.8 Izitofu zezinkuni
2.9 Izitofu zikagesi
2.10 Isitofu sikapharafini
2.11 Izitofu zikagesi
3 Izinguquko okufanele zicatshangelwe lapho ukhetha isitofu
3.1 Amandla okushisa
3.2 Usayizi wegumbi
3.5 Amawindi kanye ne-insulation
4 Indlela yokukhetha isitofu
Izitofu zikapharafini nezikaphalafini
Izitofu ze-Pellet kanye ne-biomass
I-Cyber ​​​​Monday WiFi thermostats
Izitofu ezishibhile 2022 - Inqubomgomo yobumfihlo - Imininingwane mayelana namakhukhi